Fialana andraikitra & zon'ny mpamorona |
Tongasoa eto amin'ny tranokalanay. Raha manohy mijery sy mampiasa ity tranokala ity ianao dia manaiky ny hanaraka sy voafatotr'ity famoahana manaraka ity, miaraka amin'ny fepetra sy ny fampiasana.
Ny fampahalalana ao amin'ity tranokala ity dia natao ho an'ny fampahalalana amin'ny ankapobeny fotsiny ary omen'ny stopsafeschools.com. Na eo am-piezahantsika manara-penitra hatrany hatrany ny fampahalalana, tsy misy fisoloan-kevitra na alàlana amin'ny karazan-javatra rehetra, voambara na tsy misy dikany, momba ny fahafenoana, ny mahitsy, ny fahatokisana, ny mety ho azy na ny fanajana ny tranokala na ny vaovao, vokatra, serivisy , na sarisary mifandraika ao anaty tranokala misy antony. Izay rehetra miankina amin'ny fampahalalana anao toy izany dia atahoranao manokana. Mila manao ny fanontanianao manokana ianao mba hamaritana raha mety ny fampahalalana na ny vokatra mety amin'ny fampiasanao manokana.
Ny tranokala dia manana pasipaoro momba ny fiteny amin'ny fiteny. Tsy misy andraikitra raisina ho an'ny fahamarinan'ny fandikana rehetra.
Tsy zava-nitranga no ho mendrika ny misy fahaverezana na fahasimbana anisan'izany ny tsy misy fetra, tsy mivantana, na consequential very na simba, na misy fahaverezana na fahasimbana na inona na inona fampitahorana miseho avy amin'ny very ny tahirin-kevitra na tombony fampitahorana miseho avy amin'ny, na mifandray amin'ny, ny fampiasana ity tranonkala .
Amin'ny alàlan'ity tranokala ity dia mety afaka mifandray amin'ny tranokala hafa ianao izay tsy voafehin'ny stopsafeschools.com. Izahay dia tsy manana fifehezana ny natiora, ny atiny ary ny misy ireo tranonkala ireo. Ny fidiran'ny rohy rehetra dia tsy midika akory ny fanoloran-kevitra na manamafy ny hevitra naseho tao anatin'izy ireo.
Ny ezaka rehetra atao dia mihazona tsara hatrany ny tranokala ary milamina tsara. Na izany aza, stopsafeschools.com tsy handray andraikitra amin'izany, ary tsy ho tompon'andraikitra, tsy azo vetivety ny tranokala noho ny olana ara-teknika izay tsy voafehintsika.
Ity tranonkala ity sy ny atiny dia zon'ny mpamorona CAUSE (Coalition contre amin'ny fanabeazana tsy azo antoka) - © 2018. Zo rehetra voatokana.
Ny fanomezana alalana na famerenana ny ampahany na ny votoatiny amin'ny endriny rehetra dia voarara ankoatra izao manaraka izao. Azonao atao ny manonta na misintona atiny any amin'ny kapila mafy eo an-toerana ho an'ny fampiasana manokana sy tsy varotra. Azonao atao ny mandika ny fantsona sasany ho an'ny ankolafy fahatelo fotsiny ho an'ny fampiasana azy manokana, fa raha manaiky ny tranokala ho loharanom-pitaovana fotsiny ianao.
Azonao atao ny tsy, afa-tsy amin'ny fahazoan-dàlana voasoratra an-tsoratra, mizara na manararaotra ny atiny. Tsy azonao atao ny mamindra azy na mitahiry azy amina tranokala hafa na rafitra elektronika hafa alaina.
Ny trano fandikan-teny Google eo amin'ny tranokala dia mamorona fandikan-dàlana mifototra statistika izay tsy hitazonina ao amin'ny rafitray. Informa, ny mpisolo vava antsika, ary ny fahazoan-dàlana dia tsy manao fanehoana na antoka hanomezana ny marina, ny fahavitanana, na ny fitoviana amin'ny tanjona rehetra amin'ny fandikana. Ny informa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka, ny asa, ny fangatahana, ny raharaha, ny fitakiana, ny vola, ny fandaniana, ny fahavoazana, ary ny fatiantoka hafa na amin'ny inona na amin'ny antony nahatonga azy na mivantana na tsy mivantana amin'ny fifandraisana, na mifandray na tsy mivoaka amin'ny fampiasana ny fandikana. . Ny fampiasanao an'io endri-javatra io dia miankina amin'ireto fepetra ireto